Amanqaku kaBryan Martech Zone |
Amanqaku ngu Bryan
I-WP Reset yiplagi ekuvumela ukuba usete indawo yakho ngokupheleleyo kwaye ngokuyinxenye apho kuphela icandelo elithile lebhlog yakho lifakiwe kutshintsho. Ukusetha ngokutsha kukuzicacisa, kususa zonke izithuba, amaphepha, iintlobo zeposi, amagqabantshintshi, imithombo yeendaba kunye nabasebenzisi. Isenzo sishiya iifayile zemithombo yeendaba (kodwa asizidwelisi phantsi kwemithombo yeendaba), kunye nokudityaniswa okunje ngee-plugins kunye nokulayishwa kwemixholo, kunye nazo zonke iimpawu eziphambili ze
Lwesine, Matshi 21, 2019 Lwesine, Matshi 21, 2019 Bryan
Indawo yentengiso yanamhlanje iya isanda ngokukhuphisana. Ngenxa yoko, oku kubeka uxinzelelo olukhulu kumagqwetha amaninzi nakwiifemu zomthetho ukuba zivele kolu khuphiswano. Kunzima ukuzama ukubakho ngobuchule kwi-intanethi. Ukuba indawo yakho ayinyanzelisi ngokwaneleyo, abathengi baya kubakhuphiswano bakho. Kungenxa yoko le nto, uphawu lwakho (kwaye oko kubandakanya iwebhusayithi yakho) kufuneka lube nefuthe elibonakalayo kwishishini lakho, likuncede ufumane abathengi abatsha, kunye nokukhuthaza